भागरथी हत्याको निरीक्षण गर्न सुदूरपश्चिमका प्रहरी प्रमुख सुवेदी आफैं लागे घटनास्थलतर्फ ! | सुदुरपश्चिम खबर
भागरथी हत्याको निरीक्षण गर्न सुदूरपश्चिमका प्रहरी प्रमुख सुवेदी आफैं लागे घटनास्थलतर्फ !
बैतडी : बैतडीको दोगडाकेदार-७ मा भएको हत्याको निरीक्षणका लागि सुदूरपश्चिम प्रहरी कार्यालयका प्रमुख उत्तमराज सुवेदी आफैं घटनास्थलतर्फ गएका छन् । चुडेपानीकी १७ वर्षीया भागरथी भट्टको हत्या अनुसन्धान सुपरीवेक्षणका लागि सुवेदी त्यहाँ पुगेका हुन् ।
प्रदेश प्रहरीका वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) मुकेश सिंहका अनुसार सुवेदी आइतबार बिहानै त्यसतर्फ गएका हुन् । घटनाको छानविनका लागि प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) सुवेदीले शुक्रबारै प्रदेशका अर्का एसएसपी जनकराज पाण्डेलाई पनि खटाइसकेका छन् ।
प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को टोली पनि खटाइसकेको छ । कञ्चनपुरको निर्मला हत्या प्रकरणको अनुसन्धानका लागि खटिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) पञ्चकुमार बाखु नेतृत्वको टोलीलाई बैतडी पठाइएको हो ।
बाखु नेतृत्वको टोलीले घटनाको प्राविधिक विश्लेषणमा सहयोग गर्नेछ । भट्टको मोबाइल प्रहरीले बरामद गरेको छ, त्यसको कल डिटेल लगायतको विश्लेषणबाट अनुसन्धानमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
बलात्कारपछि हत्याको आशंका
सनातन धर्म माध्यमिक विद्यालयमा पढ्न गएकी उनी बुधबार साँझसम्म घर फर्किइनन् । त्यसपछि बालिका हराएको भन्दै खोजी सुरु थालिएको थियो । बिहीबार बिहान उनको शव लबलेक सामुदायिक वनमा भेटियो ।
मुख्य सडकबाट ५० मिटर टाढा शव भेटिएलगत्तै तालिम प्राप्त कुकुर लगेर प्रहरीले स्नीफिङ गराएको थियो । सामान्य पानीसमेत परिरहेको भए पनि कुकुरले शव भेटिएकै स्थान वरिपरि घटना भएको संकेत गरेको थियो ।
अनुसन्धानमा खटिएका एक अधिकृतले सुनाए, ‘झाडी माडिएको र घिसारिएको चोटपटक भएकाले पनि घटना नजिकै भएको हुनसक्ने देखिएको छ ।’
गगन थापाको आरोप: प्रधानमन्त्री ओलीले भगवानप्रतिको आस्थामा खेल्न खोजे !
जानी राखौं, हिन्दू धर्म शास्त्रअनुसार कुन अंग फर्फराउँदा के हुन्छ ?